Cipro (ဆိုင်ပရို) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Cipro (ဆိုင်ပရို)
Cipro (ဆိုင်ပရို) ကဘာလဲ။
Generic Name: Cipro (ဆိုင်ပရို) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Cipro (ဆိုင်ပရို) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Cipro® ကိုဘက်တီးရီးယားပိုးကူးစက်ခြင်းမျိုးစုံကိုကုသရာမှာ ပဋိဇီဝဆေးအဖြစ်နဲ့ အသုံးပြုပါတယ်။Ciprofloxacinဟာquinoloneလို့ခေါ်တဲ့ ပဋိဇီ၀ ဆေးဝါးအုပ်စုမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဘက်တီးရီးယားများပေါက်ပွားမှုကိုရပ်တန့်စေတဲ့ အစွမ်းရှိပါတယ်။ anthrax နဲ့ ပလိပ်စတဲ့ ရောဂါပိုးအချို့ကိုထိတွေ့ဖူးသူတွေမှာကုသနိုင်ပါတယ်။
Cipro (ဆိုင်ပရို) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Cipro® ဟာfluoroquinolone အုပ်စုဝင် ပဋိဇီဝဆေးဖြစ်ပြီးဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆိုးရွားတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ချရတဲ့ ပဋိဇီဝဆေးတွေနဲ့ ကုသလို့မရမှသာCipro® နဲ့ ကုသရပါတယ်။
Cipro® ဟာ ကြွက်သားချောင်းတွေ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ စုတ်ပြဲခြင်း ဖြစ်စေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အသက် ၆၀ကျော်ရင်၊ စတီးရွိုက်ဆေးတွေ သောက်နေရင်၊ ကျောက်ကပ် နှလုံးအဆုတ် စတာတွေ အစားထိုးခွဲစိတ်ထားဖူးရင် ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဆေးကိုစာနဲ့ဖြစ်စေအစာမပါဘဲ ဖြစ်စေတနေ့ကို ၂ကြိမ် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းမနက်-ည သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ကျောက်ကပ် အလုပ် ကောင်းကောင်းလုပ်အောင် ရေများများနဲ့ သောက်ပါ။ ဆေးကို ဝါးစားရင် အရသာခါးတာကြောင့် ဆေးတတောင့်လုံးသောက်ပါ။
တခြားဆေးတွေမသောက်ခင် အနည်းဆုံး ၂နာရီ၊ ဒါမှမဟုတ် သောက်ပြီး ၆နာရီကြာမှ ဒီဆေးကိုသောက်ပါ။ အာနိသင်မလျော့အောင် ဖြစ်ပါတယ်။
Cipro (ဆိုင်ပရို) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Cipro® ကိုအခန်းအပူချိန်မှာတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည် မထိတွေ့အောင်၊ စိုစွတ်မှု မရှိအောင် သိမ်းဆည်းတာဟာအကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင် ပျက်ပြယ်ခြင်း၊ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းခြင်းမဖြစ်ရအောင် ရေချိုးခန်းတွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း၊ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းမပြုရပါ။ Cipro® ဆေးအမျိုးအစား၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှု ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းခြင်းမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးများအားလုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Cipro® ကိုအိမ်သာတွင်းထဲပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချခြင်းမလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးတွေကို မလိုအပ်တော့ရင်၊ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားရင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ ဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ် ဆိုတာကို ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
Cipro (ဆိုင်ပရို) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Cipro® တွင် ပါဝင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်မှုဖြစ်ခြင်း
ကြွက်သားများပြသနာရှိရင် Cipro®သောက်လို့ မရပါဘူး။ ကြွက်သားများအားနည်းတဲ့ရောဂါရှိရင် ဆရာဝန်ကိုပြောပြပါ။
အဆစ်များရုတ်တရက် နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ သွေးခြေဥခြင်း၊ တောင့်တင်းခြင်းနဲ့ လှုပ်ရှားရာမှာ ပြသနာရှိရင် Cipro®သောက်တာကိုရပ်ပြီး ဆရာဝန်ပြပါ။ ဆေးကုသမှု မခံယူခင် အဆစ်များကိုအနားပေးပါ။
Cipro®ကို နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ နို့၊ ဒိန်ချဉ်၊ ကယ်ဆီယမ်အားဖြည့်အချိုရည် စတာတွေနဲ့ မသောက်ပါနဲ့။ ပုံမှန်အစားအသောက်ထဲမှာထည့်စားနိုင်ပေမယ့် သူတို့ချည်းသက်သက် Cipro®နဲ့ တွဲမသောက်ပါနဲ့။ အာနိသင်လျော့တတ်ပါတယ်။
Cipro®သောက်ပြီး ၂နာရီနဲ့ မသောက်မီ ၆နာရီအတွင်း အောက်ပါဆေးတွေ မသောက်ပါနဲ့။ အာနိသင်လျော့တတ်ပါတယ်။
magnesium (သို့) aluminum ပါသောလေဆေးများ (Maalox, Mylanta, Rolaids), (သို့) အနာကျက်ဆေးsucralfate (Carafate)
Didanosine (Videx) ဆေးမှုန့် (သို့) ဝါးစားနိုင်သော ဆေးပြားများ
phosphate ပေါင်းစပ်ဆေး။ lanthanum carbonate (Fosrenol) (သို့) sevelamer (Renagel)
ကယ်လ်ဆီယမ်၊ သံဓါတ်၊ ဇင့်ဓါတ် ပါဝင်သော ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓါတ်များ
Cipro®နဲ့ ကော်ဖီတွဲမသောက်ပါနဲ့။ ကဖိန်းဓါတ်အာနိသင် ပိုများလာနိုင်ပါတယ်။
Cipro®ဟာတွေးခေါ်မှု၊ တုံ့ပြန်မှုတွေကိုထိခိုက်စေပါတယ်။ ကားမောင်းချိန်၊ သွက်လက်စွာဆောင်ရွက်ရချိန်တွေမှာCipro®သောက်ရင် သတိထားပါ။
ပဋိဇီဝဆေးဖြစ်တာကြောင့် ဝမ်းပျက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ သွေးဝမ်းသွားခြင်း ဖြစ်လာရင် ဆရာဝန်ပြပါ။ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် ဆေးမသောက်ပါနဲ့။
နေရောင်ခံခြင်း၊ အသားညိုစေတဲ့ ပေါင်းချောင်များအသုံးပြုခြင်းမလုပ်ပါနဲ့။ Cipro®ဟာနေလောင်လွယ်စေပါတယ်။ အပြင်ထွက်ရင် လုံခြုံတဲ့ အဝတ်အစားများဝတ်ပါ။ နေရောင်ခံခရင်မ်များလိမ်းပါ။ နေရောင်ထဲထွက်ပြီးချိန် ဆိုးရွားစွာနေလောင်ခြင်း၊ အသားနီရဲခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ အကွက်ပေါ်ခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်းစတာတွေဖြစ်ရင် ဆရာဝန်ပြပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Cipro (ဆိုင်ပရို) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Cipro® ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သောလေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီဖြစ်နိုင်ခြေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ရန်သင့်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။
Cipro® ဆေးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် C ရှိသည်ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။)
Cipro (ဆိုင်ပရို) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အစာအိမ်ဆိုးရွားစွာအောင့်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ သွေးဝမ်းသွားခြင်း
ရင်ဘတ်အောင့်ပြီးခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်း၊ သတိလစ်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း
ကြွက်သားချောင်းစုတ်ပြဲသည့် လက္ခဏာများ။ အဆစ်တခုခုတွင် ရုတ်တရက် နာကျင်ခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ သွေးခြေဥခြင်း၊ တောင့်တင်းခြင်း၊ လှုပ်ရှားရခက်ခြင်း၊ အသံမြည်ခြင်း
အာရုံကြောလက္ခဏာများ။ ထုံကျင်ခြင်း၊ အားနည်းခြင်း၊ ပူခြင်း၊ နာခြင်း၊ အပူဒဏ်နှင့် သာမန်ထိတွေ့ခြင်းများကိုမခံနိုင်ခြင်း၊ ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုဒဏ် မခံနိုင်ခြင်း
စိတ်ဓါတ်နှင့်အပြုအမူပိုင်းပြောင်းလဲခြင်း။ စိတ်ကျခြင်း၊ ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ အာရုံခြောက်ခြားခြင်း၊ တုန်လှုပ်ခြင်း၊ စိတ်ပူပန်ခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်း၊ ပုံမှန် မဟုတ်သောအတွေးများ ဝင်လာခြင်း၊ ပြုမူလာခြင်း
အသည်းပြသနာများ။ အစာအိမ်အပေါ်ပိုင်းအောင့်ခြင်း၊ အစားပျက်ခြင်း၊ ဆီးမည်းခြင်း၊ ဝမ်းများရွှံ့ရောင်သွားခြင်း၊ အသားဝါခြင်း
ဦးခွံရိုးအတွင်းဖိအားတက်ခြင်း။ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ နားအူခြင်း၊ နားနောက်ပိုင်းနာခြင်း၊ အမြင်အာရုံပြသနာများ
အရေပြားနာကျင်လာပြီးအနီကွက်များပေါ်လာပြီးတခြားနေရာများသို့ ပျံ့သွားခြင်း၊ အရည်ကြည်ဖုထခြင်း၊ အရေပြားကွာကျခြင်း
Cipro®နဲ့ ဓါတ်မတည့်ခြင်းလက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ အင်ပျဉ်ထခြင်း၊ အရေပြားပေါ် အကွက်ဖြစ်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ အသက်ရှူခက်ခြင်း၊ မျက်နှာ နှုတ်ခမ်း လျှာ လည်ချောင်းစတာတွေ ရောင်ရမ်းခြင်းများ ဖြစ်ပွားရင် အရေးပေါ် ဆေးကုသမှု ခံယူပါ။
အထက်ဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ မပါဝင်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိရင် သင့်ရဲ့ဆရာဝန် (သို့) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Cipro (ဆိုင်ပရို) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Cipro® ဟာသင်ယခုသောက်သုံးနေတဲ့ တခြားဆေးဝါးများနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်မလာစေဖို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးအားလုံး စာရင်းလုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်ရာတွင် ဆရာဝန် ညွှန်ကြားထားသော၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေသော၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါဝင်သည်) ဆရာဝန် (သို့်) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက် မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းများမပြုလုပ်ရပါ။
Cyclosporine, methotrexate, metoclopramide, omeprazole, pentoxifylline, phenytoin, probenecid, ropinirole, sildenafil, theophylline
နှလုံးစည်းချက်ဆိုင်ရာဆေးများ – amiodarone, disopyramide, dofetilide, dronedarone, procainamide, quinidine, sotalol, နှင့် အခြားဆေးများ
စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးများ – amitriptylline, clomipramine, clozapine, desipramine, duloxetine, iloperidone, imipramine, nortriptyline
စတီးရွိုက်မဟုတ်သောအရောင်ကျဆေးများ – aspirin, ibuprofen (Advil, Motrin), naproxen (Aleve), celecoxib, diclofenac, indomethacin, meloxicam
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Cipro (ဆိုင်ပရို) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Cipro® ဟာအစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှု ပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်မလာစေဖို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ခြေရှိမရှိမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ကော်ဖီနဲ့ တွဲသောက်ရင် ကဖိန်းဓါတ် ပိုအားကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။ ဗီတာမင်၊ သတ္တုဓါတ်တွေနဲ့ အတူတွဲမသောက်ပါနဲ့။ magnesium၊ aluminum၊ ကယ်လ်ဆီယမ်၊ သံဓါတ်၊ သတ္တုဓါတ် စတာတွေဟာciprofloxacinစုပ်ယူမှုနဲ့ အာနိသင်ကိုလျော့ကျစေပါတယ်။
Cipro®ကို နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ နို့၊ ဒိန်ချဉ်၊ ကယ်ဆီယမ်အားဖြည့်အချိုရည် စတာတွေနဲ့ မသောက်ပါနဲ့။ ပုံမှန်အစားအသောက်ထဲမှာထည့်စားနိုင်ပေမယ့် သူတို့ချည်းသက်သက် Cipro®နဲ့ တွဲမသောက်ပါနဲ့။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Cipro (ဆိုင်ပရို) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Cipro® ဟာသင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ ပေါင်းစပ်ဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အောက်ပါရောဂါများရှိလျှင် ဓါတ်ပြုပြောင်းလဲမှုတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
အီးစီဂျီတွင် QT အလျားရှည်ခြင်း
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Cipro (ဆိုင်ပရို) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
၅၀၀-၇၅၀မီလီဂရမ်ကို ၁၂နာရီကြာတိုင်း (တပတ်မှ၂ပတ်)သောက်သုံးရန်။
၅၀၀-၇၅၀မီလီဂရမ်ကို ၁၂နာရီကြာတိုင်း (၄ပတ်မှ၈ပတ်)သောက်သုံးရန်။
၅၀၀မီလီဂရမ်ကို ၁၂နာရီကြာတိုင်း (၇ရက်မှ၁၄ရက်)သောက်သုံးရန်။
၅၀၀မီလီဂရမ်ကို ၁၂နာရီကြာတိုင်း (၅ရက်မှ၇ရက်)သောက်သုံးရန်။
၅၀၀မီလီဂရမ်ကို ၁၂နာရီကြာတိုင်း (၁၀ရက်)သောက်သုံးရန်။
နောက်ဆက်တွဲပြသနာမရှိသောဆီးလမ်းကြောင်းနှင့် သားအိမ်ခေါင်း ဂနိုရောဂါပိုးဝင်ခြင်းအတွက်
၅၀၀မီလီဂရမ်ကို ၁၂နာရီကြာတိုင်း (ရက်ပေါင်း ၆၀/ ၄ပတ်မှ ၈ပတ်)သောက်သုံးရန်။
၅၀၀-၇၅၀မီလီဂရမ်ကို ၁၂နာရီကြာတိုင်း (၁၄ရက်)သောက်သုံးရန်။
ဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့် နာတာရှည် ဆီးကျိတ်ရောင်ခြင်းအတွက်
၅၀၀မီလီဂရမ်ကို ၁၂နာရီကြာတိုင်း (၂၈ရက်)သောက်သုံးရန်။
၅၀၀-၇၅၀မီလီဂရမ်ကို ၁၂နာရီကြာတိုင်း (၇ရက်မှ ၁၄ရက်)သောက်သုံးရန်။
၂၅၀-၅၀၀မီလီဂရမ်ကို ၁၂နာရီကြာတိုင်း (၇ရက်မှ ၁၄ရက်)သောက်သုံးရန်။
၂၅၀မီလီဂရမ်ကို ၁၂နာရီကြာတိုင်း (၃ရက်)သောက်သုံးရန်။
ကလေးတွေအတွက် Cipro (ဆိုင်ပရို) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသက်၁နှစ်မှ ၁၇နှစ်အထိကလေးများဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်ခြင်း၊ ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်းအတွက်
ကိုယ်အလေးချိန် ၁ကီလိုဂရမ်လျှင် ၁၀-၂၀မီလီဂရမ်နှုန်းဖြင့် (၅၁ကီလိုကျော်သော ကိုယ်အလေးချိန်မှာပင် အများဆုံး၇၅၀ မီလီဂရမ်မကျော်စေဘဲ) ၁၂နာရီခြားစီဖြင့် ၁၀ရက်မှ ၂၁ရက်ထိ သောက်သုံးရန်။
ကိုယ်အလေးချိန် ၁ကီလိုဂရမ်လျှင် ၁၅မီလီဂရမ်နှုန်းဖြင့် (အများဆုံး၅၀၀မီလီဂရမ်) ၁၂နာရီခြားစီဖြင့် ရက်ပေါင်း ၆၀ သောက်သုံးရန်။
ကိုယ်အလေးချိန် ၁ကီလိုဂရမ်လျှင် ၁၅မီလီဂရမ်နှုန်းဖြင့် (အများဆုံး၅၀၀မီလီဂရမ်) ၈-၁၂နာရီခြားစီဖြင့် ၁၀ရက်မှ ၂၁ရက်ထိ သောက်သုံးရန်။
Cipro (ဆိုင်ပရို) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Cipro® ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
ciprofloxacin hydrochloride ၂၅၀ မီလီဂရမ် ဆေးပြား၊ သောက်ဆေးရည်
ciprofloxacin hydrochloride ၂၅၀ မီလီဂရမ် ဆေးပြား
အရေးပေါ်အခြေအနေ သို့မဟုတ် ဆေးပမာဏလွန်သွားတဲ့အခြေအနေများမှာ အရေးပေါ် ဆေးရုံဆေးခန်းများသို့ သွားရောက်ကုသမှု ခံယူပါ။
Cipro® ဆေးကိုသောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ရင် (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသုံးစွဲပါ။ ဒါပေမယ့်နောက်တစ်ကြိမ် သုံးစွဲရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်လွတ်သွားတဲ့ အကြိမ်ကိုကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာသာသုံးစွဲပါ။ ဆေးပမာဏကိုနှစ်ဆတိုးသုံးစွဲခြင်းမလုပ်ပါနဲ့။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဩဂုတ် 25, 2019
Cipro. https://www.drugs.com/cipro.html. Accessed July 31, 2017
Cipro. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-1124-93/cipro-oral/ciprofloxacin-oral/details#uses. Accessed July 31, 2017
လက်ချောင်းများရောဂါပိုးဝင်ခြင်းကို ကုသဖို့ သိသင့်သောအချက်များ